Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, oo ay wehelinayaa xubno golaha wasiirada ka mid ah ayaa maanta kormeer ku soo maray cusbitaalka guud ee Hargeysa. Waxaanu madaxweynuhu mid mid u soo maray waadhadhka jiifka ee bukaanku yaalo, isaga oo madaxweynuhu ugu horeeyey qabta caruurta oo ay warbixin ka siiyeen agaasimaha guud ee Cusbitaalka, wasiirka Caafimaadka iyo xubno ka mida hawladeena dhakhtarku. Sidoo kale waxa madaxweynaha la tusay muuqaalka guud ee qorshaha dhisme loogu talogalay hadii eebbe qadaro inuu cusbitaalka loo dhiso oo nashqadiisa iyo qaabka uu u eekaandoono ay madaxweynaha sharaxaad ka siiyeen Wasiirka Caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglatoosiye). Madaxweynaha oo ku guda jira kormeerkiisa shaqo ee uu ugu kuurgelaayo xaalada caafimaad ee ay ku sugan yihiin shacbiga u jiifa dhakharka weyn xanuunada kala duwan, ayaa dhagax dhigay 60 qol oo loogu talogalay in la seexiyo, bukaan socodka oo ay wakhtigan ku qaadato, inay maalmo sugaan in loo baneeyo qolalka ay degaan. Waxa isna xadhiga uu ka jaray madaxweynuhu mishiino casri ah oo dhawaan la keenay cusbitaalka kuwaasi oo ah (X-RAY-CT scan), Mishiinka Kelyaha sifeeya oo ka kooban 7 mishiin wakhtigaasina ay shaqadu ka socotay oo ay jiifeen dad dhawra oo loo sifaynaayey kelyaha, oo sida ay sheegeen dadkaasi todobaadkiiba mar ay soo maraan mishiinadan laguna sifeeyo, halka hawladeenada ka shaqeeyaana ay yihiin muwaadiniin dalka gudiisa loogu tababaray iyo kuwo dibeda wax ku soo bartayba. Ugu danbayna waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo loo dhisaayo gargaarka degdega ah kana casri sanaan doona xaruntii hore loogu shaqayn jiray, ka dibna waxa uu madaxweynuhu ku soo noqday xafiiskiisa isaga oo madaxweynuhu lug ku tegay cusbitalka. | Duul News International
Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, oo ay wehelinayaa xubno golaha wasiirada ka mid ah ayaa maanta kormeer ku soo maray cusbitaalka guud ee Hargeysa. Waxaanu madaxweynuhu mid mid u soo maray waadhadhka jiifka ee bukaanku yaalo, isaga oo madaxweynuhu ugu horeeyey qabta caruurta oo ay warbixin ka siiyeen agaasimaha guud ee Cusbitaalka, wasiirka Caafimaadka iyo xubno ka mida hawladeena dhakhtarku. Sidoo kale waxa madaxweynaha la tusay muuqaalka guud ee qorshaha dhisme loogu talogalay hadii eebbe qadaro inuu cusbitaalka loo dhiso oo nashqadiisa iyo qaabka uu u eekaandoono ay madaxweynaha sharaxaad ka siiyeen Wasiirka Caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglatoosiye). Madaxweynaha oo ku guda jira kormeerkiisa shaqo ee uu ugu kuurgelaayo xaalada caafimaad ee ay ku sugan yihiin shacbiga u jiifa dhakharka weyn xanuunada kala duwan, ayaa dhagax dhigay 60 qol oo loogu talogalay in la seexiyo, bukaan socodka oo ay wakhtigan ku qaadato, inay maalmo sugaan in loo baneeyo qolalka ay degaan. Waxa isna xadhiga uu ka jaray madaxweynuhu mishiino casri ah oo dhawaan la keenay cusbitaalka kuwaasi oo ah (X-RAY-CT scan), Mishiinka Kelyaha sifeeya oo ka kooban 7 mishiin wakhtigaasina ay shaqadu ka socotay oo ay jiifeen dad dhawra oo loo sifaynaayey kelyaha, oo sida ay sheegeen dadkaasi todobaadkiiba mar ay soo maraan mishiinadan laguna sifeeyo, halka hawladeenada ka shaqeeyaana ay yihiin muwaadiniin dalka gudiisa loogu tababaray iyo kuwo dibeda wax ku soo bartayba. Ugu danbayna waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo loo dhisaayo gargaarka degdega ah kana casri sanaan doona xaruntii hore loogu shaqayn jiray, ka dibna waxa uu madaxweynuhu ku soo noqday xafiiskiisa isaga oo madaxweynuhu lug ku tegay cusbitalka.	(Duulnews.com)-Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, oo ay wehelinayaa xubno golaha wasiirada ka
mid ah ayaa maanta kormeer ku soo maray cusbitaalka guud ee Hargeysa.
Madaxweynaha oo ku guda jira kormeerkiisa shaqo ee uu ugu kuurgelaayo xaalada caafimaad ee ay ku sugan yihiin shacbiga u jiifa dhakharka weyn xanuunada kala duwan, ayaa dhagax dhigay 60 qol oo loogu talogalay in la seexiyo, bukaan socodka oo ay wakhtigan ku qaadato, inay maalmo sugaan in loo baneeyo qolalka ay degaan.